Pope Francesco ayaa booqasho taariikhi ah ku maraya dalka Ciraaq markii ugu horeysay… – Hagaag.com
Pope Francesco ayaa booqasho taariikhi ah ku maraya dalka Ciraaq markii ugu horeysay…
Galabnimadii Jimcaha, Pope Francesco ayaa booqasho ku tagay dalka Ciraaq, oo ah tii ugu horeysay oo nooceeda ah ee taariikhda dalkan, waana tii ugu horeysay ee uu ku aado dibada tan iyo markii uu bilaabmay cudurka Coronavirus, booqashadiisu ayaa socon doonta ilaa 8-da Maarso.
Gagada Diyaaradaha Caalamiga ee Baghdad, oo ah halka uu ka dagay Pope-ka Jimcihii, ayaa waxaa laga taagay boorar waaweyn oo ku baaqaya wada noolaansho iyo wada hadalka diimaha.
Raiisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al-Kazemi ayaa safka hore uga jiray soo dhaweynta Pope-ka.
Subaxnimada Sabtida, kulan aan noociisa hore loo arag oo dhexmaraya Pope-ka Vatican-ka Francesco iyo wadaadka ugu sareeya shiicada Ciraaq, Ali al-Sistani, magaalada Najaf, oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan ee uu marayo Pope-ka booqashadiisa taariikhiga ah ee uu ku joogo Ciraaq.
Horey wuxuu Pope-ka ula soo kulmay hogaamiyaasha diinta Katooliga Jimcihii magaalada Baqdaad, maanta wuxuu booqanayaa Sistani, oo 90 jir ah, oo si dhif ah uga soo muuqda fagaarayaasha, kaasi oo gurigiisa ku yaala magaalada Najaf oo 200 km koonfurta Baghdad.
Pope Francis wuxuu ku booriyay Muslimiinta inay xambaarsadaan “Kirishtaanka tirada yar ee Ciraaq oo muddo dheer go’doomin ku jiray,” sida ay qortay wakaaladda wararka Mareykanka ee Associated Press.
Waxay qaadatay bilooyin diyaar garowga kulanka taariikhiga ah ee Pope-ka ee guriga Sistani, si looga wada hadlo dhamaan faahfaahinta lagama maarmaanka ah inta lagu guda jiray wada xaajoodka u dhexeeyay xafiiska Sistani iyo Vatican-ka.
Qaar ka mid ah waddooyinka Najaf, ayaa lagu xardhay sawirrada Pope-ka iyo Sistani, iyadoo weedh ku qoran afka Ingiriisga macnaheedu tahay “kulanka taariikhiga ah.”